Discussion on ensuri - Английский - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали: discussion on ensuring indoor gas safety (Английский - Бирманский)
On October 31, blogger Bachai Sako set the tone for the discussion on blogiston.tj.
အောက်တိုဘာလ (၃၁)ရက်နေ့တွင် ဘလော့(ဂ်)ရေးသူတစ်ဦးဖြစ်သော ဘာချိုင် စာကိုသည် blogiston.
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို ဖန်တီးပြီး အဆက်အသွယ်များ တိုးမြှင့်ပါ။ အထီးကျန်ခြင်းသို့မဟုတ် ပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့ခြင်း ခံစားရမှုကို ပြေလျော့စေရန်၊ အတွေ့အကြုံများအား လွယ်ကူစွာ မျှဝေနိုင်ရန်နှင့် သင်ယူလေ့လာမှုတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရသောအခါတွင် ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများအား ဆွေးနွေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဆရာများ၊ မိဘများနှင့် ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူများပါဝင်သော လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းများ ဖန်တီးပါ။
hei aha (Маори>Английский)chesca (Английский>Корейский)motivasi (Малайский>Китайский (упрощенный))est ce que je peux aller boire de l'eau (Французский>Английский)aisa nahi to kaisa hoga (Хинди>Английский)korean name of nico (Тагальский>Корейский)coniungere nobis in altero (Латинский>Английский)14 hajar ko english (Хинди>Английский)five line about apple fruit in sanskrit (Английский>Хинди)umweltstudien (Немецкий>Английский)woh din bahut yaad aate hai (Хинди>Английский)gwapa ko (Тагальский>Корейский)zasto lazes (Сербский>Немецкий)buonanotte mi amor (Итальянский>Английский)de rien bisous (Французский>Английский)'n' nafanta (Суахили>Английский)xbox (Испанский>Польский)mandaat neerleggen (Голландский>Французский)npnbet neankn (Русский>Английский)z?hugutin (Тагальский>Английский)macam mana awak tahu (Малайский>Английский)pechu potti (Тамильский>Английский)apakah maksud mencangkung (Английский>Малайский)uxor eius (Латинский>Немецкий)ari ng suso (Тагальский>Английский)